हाम्रोखबर बुधबार, श्रावण २१ २०७७
काठमाडौं । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेकका व्यक्तिलाई प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, “अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जाँदा प्रवेशमा कुनै समस्या छैनतर सामान्यरुपमा भेटघाट, गफगाफका लागि भने ध्यान दिनै पर्छ, त्यसमा रोक लगाएको हो ।” जोखिम नबढोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक कामबाहेकका लागि उक्त व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए । भित्रबाट पास पठाएर प्रवेश अनुमति दिने कार्यमा पनि तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नागरिक आफैँले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउन र अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्किन तथा सिंहदरबार नआउनसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् । प्रेस पास भएका पत्रकारलाई कुनै रोक नलगाइएको उनले बताए । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको छ । मङ्गलबार मात्रै उपत्यकामा ६२ जनामा कोभिड–१९ देखिएको छ ।
सङ्क्रमण बढेपछि उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गरिएको र स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नगर्ने व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्न थालिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । उनले अटेर गर्नेलाई कैद सजाय गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
आईपिएलामा कोलकाताले राजस्थानलाई ३७ रनले हरायो
'डा. केसीको अवस्था गम्भीर, मांशपेशी बाउँडिन थाले'
विपी प्रतिष्ठानमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बली दिन भारत लैजाँदै गर्दा दुई किशोरीको उद्धार
मेरो जीवनसँग खेलवाड नगर्नू !
विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख ४ हजार नाघ्यो
भारतमा थप ११७९ जनाको मृत्यु, कूल मृतक संख्या ९७ हजार नाघ्यो
सुपथ मूल्य पसल : कुन सामानमा कति रुपैयाँ छुट ?
हाम्रो खबर ४४ मिनेट अगाडी
हाम्रो खबर ५४ मिनेट अगाडी
बुधबार देशभर १,५५९ जना संक्रमित थपिए, ७ जनाको निधन